Banyere Anyị - Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd
Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd., emi odude ke Qingdao, China, bụ a Hi-tech enterprise aku nnyocha, rụpụta, ahịa na technical ize nke obere na-ajụ ọhụrụ ume ọkụ eletrik emana usoro na ike na nchekwa umu usoro. Na ike R & D ike, ike àgwà akara usoro, Renergy bụ ike inye mbara ọhụrụ ume technology support ọrụ n'ihi na ndị ahịa.
Main ngwaahịa: obere na-ajụ ifufe tobaim usoro n'okpuru 100kw; anyanwụ na okporo ma anya okporo usoro, n'elu ụlọ anyanwụ usoro ulo oru mbo na-ewu ụlọ; ifufe anyanwụ n'okporo ámá ìhè, anyanwụ na ìhè maka ubi, Ikanam eto ìhè, Ikanam elu n'ọnụ mmiri ìhè, Ikanam ọwara ìhè, Ikanam n'okporo ámá ìhè, ụlọ ọrụ ìhè ike azọpụta nchèghari na ume na nchekwa umu nchèghari.
Renergy nwere isi technology na ọhụrụ ume ụlọ ọrụ. Agbanwe pitch technology maka obere na-ajụ size ifufe tobaim nwere ike idozi nchekwa nsogbu na ifufe tobaim ọrụ. Agbanwe pitch, ABS usoro nchebe, ọgụgụ isi akara usoro, ma n'ime ime obodo nlekota n'elu ikpo okwu na-enye nchekwa nchebe maka ifufe ike ebe na-agba ọsọ.
RENERGY factory nwere ọtụtụ elu na onwe-mepụtara generator ule n'elu ikpo okwu, ifufe rotor itule usoro, agbanwe pitch ule n'elu ikpo okwu, ike ọgwụgwụ ike anwale lab na ndị ọzọ dị iche iche ifufe tobaim pụrụ iche nchọpụta akụrụngwa; factory nwere ike nnyefe 100sets nke ifufe tobaim kwa ọnwa.
Wind tobaim usoro-agụnye ifufe tobaim, ụlọ elu, na okporo njikwa na inverter, maka otu na-adọ ma ọ bụ atọ na-adọ okporo njikọ. Renergy ifufe tobaim bụ ike na-dakọtara na na okporo inverters si ABB, EL ike na ndị ọzọ na ama ika na China na ná mba ọzọ.
RENERGY ifufe turbines dị nnọọ ewu ewu na Germany, Denmark na ndị ọzọ na mba Europe; arụmọrụ kemgbe ihu ọma site anyị elekọta mmadụ na ahịa. Wind tobaim usoro enwetela nnọọ ifufe ọsọ nke n'elu 45m / s na Denmark.
Wind tobaim usoro adabara ugbo, ezinụlọ, obere azụmahịa ụlọ ọrụ, telecom ojii.
Obi ụtọ na-anabata ndị ahịa na ndị enyi si n'ụwa nile ileta na kpakorita azụmahịa. Ka anyị na-arụ ọrụ ọnụ maka anyị ibe uru.